देबर भाउजु बिचको सम्बन्ध जब सासुले थाहा पाइन् ! अनि के के भयो ( हेर्नुहोस भिडियो सहित) - Microlink Media::News Media Website
सल्यानमा गत असारमा एक जना वृद्ध महिलालाई कर्तव्य गरी ह”त्या गरेको आरोपमा चार जना प”क्राउ परेका छन्। मुख्य आ”रोपित भनिएका फ’रार युवक भने शनिबारमात्रै प”क्राउ परेका छन्। गत असार ११ गते राति ९ बजे जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं. ३ झिम्पेमा ७० वर्षीया जमनी बुढा मगरको ह”त्या आ’रोपमा आफन्त र नातेदार नै प’क्राउ परेका हुन्।
जमनीको ह”त्या हुँदा उनका पाँचै भाइ छोरा रोजगारीको सिलसिलामा छिमेकी देश भारतमा मजदूरी गर्न गएका थिए। त्यतिखेर आमाको मृ’त्युबारे छोरालाई काका बालाराम बुढाले भर्‍याङबाट ल’डेर मृ”त्यु भएको कुरा फोनमार्फत् जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि छोराहरूले ल’डेर मृ’त्यु भएको हो भने परम्परा अनुसार अन्तिम सं’स्कार गर्न आग्रह गरेका थिए। उतिखेर कोरोना भाइरसको कारण छोराहरू भने घर आउन नपाएको प्र’हरी जानकारी दिएको छ।
ह”त्याको कारण अ’नैतिक सम्बन्ध : प”क्राउ परेपछि ७० वर्षीय जमनीको ह’त्याको कारण खुल्यो। सुशीला बुढा र कमल बुढाका बीचमा अनै’तिक सम्बन्ध जमनीले देखेपछि ह”त्या भएको तथ्य खुल्यो,’ डिएसपी खड्काले भने,‘प’क्राउ परेकाहरू घ’टना स्वीकार गरिसकेका छन्। कमल र सुशीलाले आफ्नो अ’नैतिक स’म्बन्ध जमनीले भनिदिने त्रासका कारण घाँ”टी थि’चेर ह”त्या गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको डिएसपी खड्काले बताए।
ह”त्यापछि घ’टना ढाकछोप गर्न कमलका बुवा बालारामले नै भाउजु जमनीको भर्‍याङबाट ल’डेर मृ’त्यु भएको भनेर छोरा र प्र’हरी सबैलाई ढाँट्न खोजे पनि सत्य कुरा ढिलै भए पनि पत्ता लागेको डिएसपी खड्काले जानकारी दिए। घ’टनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि डिएसपी खड्काले बताए। यसरी खुल्यो ह”त्याको र’हस्य : सल्यान प्र’हरी प्रमुख डिएसपी सुमित खड्काका अनुसार जमनीको मृ’त्युबारे उतिबेला देवर बालाराम बुढाले भर्‍याङबाट लडेर मृ”त्यु भएको कुरा प्र’हरीमा पनि जानकारी दिएका थिए।
जब केही समय जमनीका छोराहरू घर फर्किए उनीहरूले गाउँलेबाट फरक कुरा थाहा पाए। गाउँलेहरूले उनीहरूको आमा जनमीको मृ’त्यु भर्‍याङबाट लडेर नभई आफूहरूले झु”ण्डिएर आ”त्मह”त्या गरेको अवस्थामा देखेको कुरा गरिदिए। डिएसपी खड्काका अनुसार नेत्रले दश दिन अगाडि प्र’हरीमा आएर आमाको ह’त्या भएको भन्दै घ’टना अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेपछि प्र’हरीले अनुसन्धान थालेको हो। गाउँलेको कुराको आधारमा जमनीका साइँलो छोराले जिल्ला प्र’हरी कार्यालय सल्यानमा पुगेर आफ्नी आमाको लडेर मृ”त्यु नभई ह”त्या भएको भनेर किटानी जाहेरी दिएका थिए।
जमनीका साइलो छोरा नेत्रको जाहेरीका आधारमा प्र’हरीले उनकी काइँली बुहारी सुशीला बुढा मगर, माइली बुहारी चमेली बुढा मगर र देवर बालाराम बुढा मगरलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लियो। त्यही बीचमा बालारामका छोरा २० वर्षीय कमल बुढा फ’रार भए। फरार रहेका कमललाई प्रह’रीले शनिबारमात्रै प’क्राउ गर्न सफल भयो। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।